Firehetana narahana fipoahana mafy tetsy Andraharo : ravan’ny afo ny orinasa Sicoma, olona 80 very asa | NewsMada
Firehetana narahana fipoahana mafy tetsy Andraharo : ravan’ny afo ny orinasa Sicoma, olona 80 very asa
Raha efa ny afakomaly, tokony ho tamin’ny 9 ora sy sasany alina no nanomboka ny firehetana, tsy maty tanteraka ny afo raha tsy omaly maraina. Goavana ny fahavoazana nahazo ny orinasa Sicoma, etsy amin’ny Galaxy Andraharo. Olona 80 eo ho eo no very asa tampoka.
Nanaitra ny mponina manodidina, afakomaly alina ny fipoahana mafy be, tao amin’ny faritry ny Galaxie Andraharo. Rehefa nozihina, ny orinasa Sicoma, mpamokatra mena no nirehitra. Afobe nijoalajoala no tazana tao amin’ireo misy ny orinasa afakaba, tokony ho tamin’ny 9 ora sy sasany alina. Ny tranobe 38 sy 39 an’ny orinasa Sicoma, misy ny Vao Line sy ny Produit Impec ireo nirehitra ireo. Tsy fantatra mazava ny niavian’ny afo, sahirana tanteraka ny mpamonjy voina noho ny tsy fahampian’ny rano. Mbola nampiana ny akora simika nipoaka mafy ihany koa io alina io. Nanempotra ny entona simika nivoaka nandritra ity fahamaizana ity. Nikoropaka ihany koa ny manodidina noho ny fipoahana sy ny afo mijoalajoala. Voalaza fa sahirana ny mpamonjy voina tamin’ny famonoana afo noho ny tsy fahampian’ny rano teny an-toerana. Efa tamin’ny 2 ora maraina vao voafehy any afo, ary fantatra fa efa omaly maraina be mihitsy vao maty tanteraka izany. “Niezaka ny mpamonjy voina nanao ny asany, saingy niala maina. Tsy ampy ny rano, akora simika no betsaka ka mora nandray afo”, hoy ny fanazavana. Tsy mbola fantatra ihany koa izay tena niantombohan’ny afo. Anatin’ny fanadihadiana tanteraka ny mpitandro filaminana.
Saropady rahateo ity toerana nitrangan’ny firehetana ity satria orinasa afakaba ny ankamaroan’ny manodidina, ankoatra ireo birao lehibe eny amin’iny Galaxy iny. Araka ity zava-nitranga ity anefa, tsy ampy ny rano nampiasain’ny mpamonjy voina. Tsy ampy ny fotodrafitrasa entina miady amin’ny loza tahaka izao. Loza mahatsiravina anefa ny mety haterany raha tsy misy izay fitaovana mifanaraka amin’izay. Tranobe mijoalajoala, orinasa maro, kanefa rehefa sendra ny patsa iray tsy omby vava, tahaka izao, kila forehitra potika tanteraka.
Maro ny very asa
Araka ny voalaza, olona 80 eo ho eo ireo very asa. Maro ireo mpiasa tonga teny an-toerana vao nahalala fa may ny orinasany. Betsaka koa no fantatra fa tsy manana fifanarahana momba ny asa akory. “Mandray vola isan-kerinandro izahay. Isaky ny alatsinainy, kanefa izao may izao ny orinasa. Aiza ny volanay?”, hoy ireo mpiasa nimenomenona.
Raha araka ny lalàna, misy ny trano fiantohana manonitra ny zavatra may amin’ny tranga toy izao. Tsy nisy tompon’andraikitra afaka namaly izany anefa teny an-toerana, izay tsy nahazoazo mpanao gazety loatra. Raha ireto mpiasa tsy misy taratasin’asa ireto, mety tsy ara-dalàna loatra ny orinasa. Mandika lalàna na ara-dalàna sy miorina ara-panjakana aza. Ny mpampiasa ve anome ny zon’ireo mpiasa very asa, raha tena manana fifanarahana momba ny asa? Ny tsy manana indray, tsy afaka mitory eny anivon’ny fitsarana momba ity fahaverezana asa ity.